မူလစာမျက်နှာ - Coolordrool
သူ ဇန်နဝါရီလ 23, 2020
Lil Elfie အသစ်ကာတွန်း
နယူး camo Lil Elfie
Lil Elfie မှနောက်ဆုံးပေါ်
Skinni Kat ရုပ်ပုံ 3
Skinni Kat ရုပ်ပုံ 2
ငါတို့သည်သင်တို့ Coolordrool တွေ့ပြီဝမျးများမှာ!
ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်ဤနေရာမှညွှန်ပြသောအကောင့်များထဲမှတစ်ခု (ဥပမာ၊ Facebook.com/Coolordrool, Facebook.com/SkinniKat, Facebook.com/Reallilelfie, သို့မဟုတ် Facebook.com/DeadGirlCoffee) မှကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ကောင်းပြီ, Coolordrool ကိုမေလ 2019 မှာစတင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့တော်တော်လေးအသစ်များဖြစ်ကြသည်။
အနုပညာရှင်အမျိုးမျိုး၏ Animations များကိုတင်ပြသောကြောင့်၎င်းသည်ဖျော်ဖြေရေး ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါတို့သည်လည်းများအတွက်သီးသန့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် Street Wear ထုတ်ကုန်များ, ထံမှအဝတ်အစား Skinni Kat, Lil Elfie နှင့် သေလွန်သောသူတို့သည်မိန်းကလေးကော်ဖီ.
အကယ်၍ သင်သည် Skinni Kat၊ Lil Elfie သို့မဟုတ် Dead Girl ကော်ဖီကုန်ပစ္စည်းများ၊ တီရှပ်များ၊ hoodies များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းပေါ်ဝတ်ဆင်မှုများကဲ့သို့ ၀ ယ်လိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကိုနှိပ်ပါ။ ထုတ်ကုန်များ မီနူးအတွက် link ကို။
၎င်းသည်သင့်အားကုန်ပစ္စည်းကတ်တလောက်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည် Shopify ကုန်ပစ္စည်းအတွက်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအဝတ်အစားများအမြောက်အများတင်ပို့နိုင်သည် Los Angeles မြို့, ကယ်လီဖိုးနီးယား, အမေရိကန်နိုင်ငံ.
ထုတ်ကုန်များစာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့မပြနိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုသီးခြားခွဲ ထား၍ သင့်ကိုအလွန်အေးစေနိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပို 'အရာ' တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ tags များသည်ငါတို့နှင့်အတူယက်ထားသောတံဆိပ်များဖြစ်သည် Black ကပျံကေန Coolordrool မှကုန်ပစ္စည်းတိုင်း (Lil Elfie၊ Skinni Kat၊ Dead Girl ကော်ဖီစသည်) ပေါ်တွင်ချုပ်ထားသည်။ (များသောအားဖြင့်ဘယ်ဘက်လက်၌၊ ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်) တင်ပို့သည်။
ဤ Black Flying Kitten သည်လည်း (မည်သူတီထွင်ခဲ့သည်ကိုသတင်းပေးသောရှပ်အင်္ကျီအတွင်း၌စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အရာ) Tag ပေါ်တွင်လည်းရှိသည်။ တော်တော်အေးမြတယ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်များ၊ အနုပညာ၊ တေးဂီတနှင့်ဗီဒီယိုအသစ်များကိုတတ်နိုင်သမျှဖြည့်စွက်ရန်လုပ်ဆောင်သည်။ သင်ခံစားမိလျှင်တစ်ခုခု (“ ဒီဟာက Cool, Meh, Drool လား” လို့သင်ထင်သလား) ။
ငါတို့သည်လည်းအခမဲ့ link တစ်ခုရှိသည် Arcade ဗီဒီယိုဂိမ်းများ။
ငါတို့မှာဒီမှာရှိနေတာ၊ မဲပေးတာတွေလုပ်တဲ့အတွက်နင့်ကိုဆုပေးဖို့ 'အခြေခံ' စနစ်တစ်ခုရှိသည် Coolordrool ဒင်္ဂါးပြားမှဆုလာဘ် စနစ်။ တိုးတက်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏ပါဝင်မှုကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ သင်ရောင်းချသူများထံမှပိုက်ဆံ၊ ဒင်္ဂါးများ၊ အထူးလျှော့စျေးများရရှိလိမ့်မည်။ ကဲ့သို့ co-op? ဒါဟာ Co-op ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုမီဒီယာ link (အသင်းဝင်များ၊ အသုံးပြုသူများ) ရှိသည်။ သင်စာရင်းသွင်းလျှင်ပထမဆုံးအကြွေစေ့များစတင်ပေါ်လာသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ (ဒါကမင်းရဲ့အကောင့်ထဲကိုရောက်သွားတယ်။ )
လှုပ်ရှားမှု on wc_admin_unsnooze_admin_notes
မူပိုင်ခွင့်© All rights reserved ။